Izandiso zefayile. Zeziphi kwaye ungazibona njani izandiso ezifihliweyo | Iindaba zeGajethi
LIifayile esinazo kwikhompyuter yethu zingaboniswa kwiscreen ngeendlela ezimbini, umzekelo, ukuba unayo ifayile edityanisiweyo ebizwa ngokuba "yifayile32" unokuyibona kwikhompyuter yakho njenge "file32" okanye mhlawumbi njenge "file32.zip" okanye "file32.rar". Ukuba ubona kuphela igama elithi "file32" ikhompyuter yakho igcina ifayile ye izandiso ezifihliweyo, njengoko kuqhele ukwenzeka ngokungagqibekanga kwiWindows XP (andazi ukuba bazokuza njani kwiVista), ngoku ukuba ubona ifayile enesiphelo ".zip" okanye ".rar" (inokuba zininzi nezinye ".arc" okanye ".exe», umzekelo) emva koko ikhompyuter yakho ikuvumela ukuba ubone ifayile ye iifayile ezandisiweyo.
ANgoku unokwazi ukuba ulwandiso lwefayile luyaboniswa okanye lufihliwe kwikhompyuter yakho ngokwenza uvavanyo oludlulileyo, kodwa zeziphi izandiso kwaye zezantoni?
Zithini izandiso zefayile?
Ngolwimi oluqhelekileyo singatsho ukuba ulwandiso lwefayile ligama eliqhelekileyo, hayi rhoqo, elenziwe ngoonobumba abathathu kwaye lahlulwe kwigama lefayile ngexesha. Eminye imizekelo yolwandiso yile :.zip, .pps, .exe, .pdf, .jpg, .avi, .3gp, .pando, .png, .bmp, .mov, .html, njl.
Iinkqubo zokusebenza ezinje ngewindows zisebenzisa izandiso ukubona ifomathi yefayile. Oko kukuthi, ukuba ubona ifayile ebizwa ngokuba yi "uncompressed.rar" uyazi ukuba yi ifayile edityanisiweyo kuba, nangona igama layo lisitsho ngenye indlela, inolwandiso ".rar" oluhambelana nolunye lweendidi zolwandiso ezisetyenziswa ziifayile ezixineneyo.
ANangona ulwandiso lungabonakali, inkqubo yokusebenza iya kuzifunda kuba zisencanyathiselwe kwifayile nokuba awuziboni. Ngale ndlela ikhompyuter iya kukuvumela ukuba wenze imisebenzi ethile okanye ezinye ezinayo loo fayile kuxhomekeke kulwandiso lwayo.
PUnokuzibuza ukuba kutheni ndifuna ukubona ifayile ye- ulwandiso lwefayile ukuba ikhompyuter sele iyazi indlela yokuphatha nangona ndingaziboni? Ewe, ngenxa yezizathu ezininzi:
Okokuqala kuba ngale ndlela uya kuba nolawulo ngakumbi kwiifayile ezikwikhompyuter yakho kwaye uya kuyiphucula khu seleko kuye.
Ukuba, umzekelo, ukhuphele umfanekiso kwi-Intanethi obizwa ngokuba "yi-photograph.jpg.exe" kwaye une-extensions ezifihliweyo, uya kubona kuphela "photograph.jpg" kuba kule meko ulwandiso ngu ".exe" oluhambelana ifayile ephunyeziweyo. Musa ukungxama, khumbula loo nto ulwandiso luya esiphelweni sefayile. Ukuba le fayile ibibizwa «fotografia.jpg» ibiya kuba ngumfanekiso kunye nolwandiso «.jpg», kodwa ekubeni ifayile ibizwa «fotografia.jpg.exe» ulwandiso ngu «.exe» kwaye ke yinkqubo leyo umntu othile wayefuna ukufihla emva kokuvela kwefoto.
Oku kunokuthetha ukuba inkqubo ekuthethwa ngayo yile intsholongwane Kwaye bafuna ukuyinyonyobela. Ngapha koko, nokuba unolwandiso olufihliweyo, inkqubo yokusebenza iya kuyamkela ukuba yifayile esebenzayo kwaye ke iya kuyiveza kwiscreen njenge icon Yenkqubo kwaye hayi naleyo yomfanekiso. Kodwa ukuba awunikeli ngqalelo kwaye awaziqondi ezo nkcukacha, unokufaka intsholongwane ucinga ukuba uvula umfanekiso.
Sibini kuba ukuba ulandela naluphi na uqeqesho onokulufumana apha VinagreAssino.com Uya kubona ukuba ndihlala ndibhekisa kwiifayile ezinamagama kunye nolwandiso. Ngale ndlela kulula landela iincwadi kwaye kulungile ukuba uqhelane, ukuba awukabikho, ukuze ube nolawulo ngaphezulu kwento oyenzayo ngekhompyuter yakho.
SUkuba awukwazi ukubona ulwandiso lweefayile (okanye iifayile) kwikhompyuter yakho kwaye ufuna ukuzibona, nantsi into ekufuneka uyenzile ukubenza babonakale kwiscreen.
1) Sidinga ukuvula nayiphi na iwindow yewindows. Indlela ekhawulezayo yokwenza oko ngokunqakraza kabini "kwiKhompyutha yam". Kulo mfanekiso ungezantsi ungabona ezi ndawo zintathu apho unokufumana khona i "My Computer" icon. Ukusuka kwimenyu yokuQala, kwidesktop, okanye kuQalo oluKhawulezayo kwibar yomsebenzi.
2) Xa iwindow ebizwa ngokuba yi "My Computer" ivula, cofa phezulu efestileni apho ithi "Izixhobo". Kwaye kwimenyu ehlayo evulayo, cofa kwi "Ifolda ongakhetha kuyo ..." esezantsi kuloo menyu.
3) Ifestile "yeFolder Options" iya kuvula, iqulethe iithebhu ezintathu. Cofa kwindawo ethi "Jonga" kwaye emva koko uskrole ngecala esezantsi (jonga umfanekiso) kwindawo ebizwa ngokuba yi "Advanced settings" ude ubone ukhetho Msgstr "Fihla izandiso zefayile zeentlobo zefayile ezaziwayo" iya kuphawulwa. Into ekufuneka uyenzile kukungayiqwalaseli le bhokisi ukuze ubone izandiso ezifihliweyo. Xa ugqibile, cofa kwindawo ethi "Faka kuzo zonke iifolda" indawo ephezulu kwindawo ebizwa ngokuba yi "Folder views". Ngale ndlela siza kwenza ukuba ukwandiswa kwazo zonke iifayile kubonakale kuzo zonke iifolda. Kumfanekiso ongezantsi, yonke into ibonakalisiwe ukuba isebenza njengesalathiso.
Okulandelayo, iwindow ebizwa ngokuba "yifolder views" izakuvula apho inkqubo yokusebenza ibuza ukuba uyafuna ukuqwalasela zonke iifolda ezikwikhompyuter ukungqinelana noseto olwenzileyo. Cofa ku "Ewe" kwaye uqhubeke.
4) Emva koko nqakraza kwiqhosha "Faka isicelo" kwikona esezantsi ngasekunene ye "Iifolda Izinketho" iwindow ukuze utshintsho olwenziwe lugcinwe.
Okokugqibela, cofa ku "Kulungile" ukuvala ifestile.
ANgoku ulwandiso lwefayile luyabonakala kwaye uya kuba nakho ukulawula ngaphezulu. Okokugqibela, funda ezi ngcebiso zimbini ukunqanda iingxaki:
Ngoku xa utshintsha igama layo nayiphi na ifayile kufuneka unikele ingqalelo kuyo Sukutshintsha ulwandiso ukuphatha ifayile. Inkqubo yokusebenza iya kukuxwayisa ukuba uzama ukuyenza, kodwa ukuba uyenza ngempazamo, akukho nto yenzekayo, uyiqambe ngokutsha ngokubeka ulwandiso oluhambelanayo ekugqibeleni.
Musa ukucinga ukuba unako tshintshela kwifomathi enye uye kwenye ngokutshintsha ulwandiso lwefayile. Ukuba unayo ividiyo ebizwa ngokuba yi "video.avi", sukucinga ukuba ngokuyithiya ngokutsha "ividiyo.wmv" sele uyiguqulele kwifomathi yeWindows Media Video (wmv). Ifayile iya kuqhubeka iyividiyo kwifomathi ye "AVI" kwaye ekuphela kwento oya kuyiphumeza kukuba inkqubo yokusebenza ayizukuyivula kunye nesicelo esihambelanayo kwaye ngenxa yoko awuyi kuba nakho ukuyijonga.
BEwe konke kunxulumene nolwandiso kwaye kutheni kubalulekile ukuba sizibone kwaye singazigcini zifihliwe. Kwelinye inqaku siza kubona ukuba zeziphi ezona zixhaphakileyo zixhaphakileyo (zip, avi, bmp, ...), zeziphi iifomathi ezimele zona (zixinaniswe, ividiyo, umfanekiso, ...) kwaye zithini iprogram kufuneka sisebenzise nganye. Kude kube ngoko, imibuliso yomdiliya.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Izandiso zefayile. Zeziphi kwaye ungazibona njani izandiso ezifihliweyo
Ngaba uyazi naliphi na iqhinga lokuphinda unike igama iifayile ngolwandiso olufihliweyo ngokutshintsha ulwandiso ngokunjalo. Kubonakala ngathi bendikhe ndayifunda ndaweni ithile ukuba kufuneka ifakwe kwiimpawu zokucaphula. Ndiza kuhlala ndijonga.
Kwaye kutheni ufuna ukutshintsha izandiso nazo?
ANA LUISA sitsho
Ndifuna ukufunda izinto ezintsha
Phendula ANA LUISA
Ndilandele onke amanyathelo kwaye iifayile azibonakali ... ziyimifanekiso
Ndingenza ntoni? kwaye ndiyazidinga
Ewe, akukho luvo uMiguel, kwithiyori kufuneka ubabone.
Ndenze amanyathelo owandibuza wona ngeviniga yokubulala ...
kwaye ngoku ndiza kuyifaka ukuba ndiyaphumelela, ndiza kukubhalela kwaye ukuba akunjalo, siza kukubona Kuidense ...
hello iviniga ingxaki yam yile ilandelayo thumela kwifomathi yam i-pc kwaye ndifakele iinkqubo ezininzi kodwa okwangoku ukukhuphela iiwindows live messenger ayiqhubeki nenkqubo umyalezo awuyiyo isicelo se-win32 esivumelekileyo ukuba undikhokela kancinci
Into yokuqala kukuba ujonge ulwandiso onalo, uya kuyazi ukuba kanjani? Ke ukuba awuboni nto ingaqhelekanga, kufuneka ibe .exe okanye icinezelwe .rar okanye .zip (ngesiqhelo), unokukhuphela inkqubo yenye inkqubo yokusebenza (kunqabile kodwa mhlawumbi). Zama ukuyikhuphela kwaye ukuba yonke into ihamba kakuhle, i-antivirus iya kudlula kwimeko apho into eyadlulayo ibingazukuthenjwa. Umbuliso.
Molo, jonga, ndifuna ukwazi ukuba ndizicima njani iifayile, iifolda okanye naluphi na ulwandiso olonakalisa okanye olucothisa ipc yam kunye nendlela endiyifumana ngayo.
izandiso ezingasebenziyo kwi-pc yam.
Enkosi, fancy, enkosi mercenary!
Ndathumela ezinye iifayili ze-AUTOCAD (UKWANDISWA KWE-DWG), KODWA NGAPHANDLE KOKWANDISWA KWEENKQUBO BENZA UKWANDISWA KWE-VEM… .Ndingazivula Njani?
KUBALULEKILE UKUBA NEENKCUKACHA EZIFIHLIWEYO
Iproteus ares andikwazi ukuyifaka kwi-cpu yam xa ndigqiba ukufaka le nkqubo ndifumana intengiso ethi ifayile yelayisensi.exe ilahlekile, ndingayilungisa njani, ndingenza ntoni?
Enkosi mhlobo, ubusindisile ubomi bam, ndifumene iifayile ezininzi kwaye ndingasaboni zongezelelo, bendihambisa izinto ezithile kwaye ndijijile njengomntu othi undisindise ngokwenene, enkosi kwakhona
NDIZIJONGA NJANI IIFAYILI NGOKWANDISWA KWE-SQM KWAYE NDINEZINYE IIFAYILI ENDINGENAKUZIBONA UKWANDISWA KWABO ANDIZI UKUBA NDIZISUSE NTONI
Andinakubakho iividiyo kwi-pc yam abandithumelele yona .3gp ulwandiso
Yintoni ekufuneka ndiyenzile ?????????
LIHLE KAKHULU inqaku, ndikhangela ulwazi ngezona zixhobo zilungileyo zeaudiyo kunye nevidiyo ukuze ndizipapashe kumaphepha ewebhu, ndiyaluxabisa ukhokelo lwakho…
Molo, uyabona, ndisebenzisa i-antivirus kunye ne-anti-rootkits kuba ikhompyuter yam inesifo kwaye nakwezinye iiwebhusayithi bacebisa ukuba ungazifihli iifayile kunye nezandiso ukuzifumana kwaye sele ndenzile.
Kodwa yintoni endothusayo xa kwikona nganye kunye nefolda ndifumana AMAKHULU eefayile ezifihliweyo ezibonakala ngathi azicacanga, kwaye iyandothusa ngoba zininzi izinto endizicimileyo kwiinyanga ezidlulileyo.
Umbuzo wam ngowokuba ndingazicima ezi fayile kwakhona okanye kuya kwenzeka into?
Phendula ku kaiser
Ndingazibona njani ii-imeyile ngolwandiso lweWMV kunye neAVI.
Molweni nemibuliso ingxaki yam kukuba bendifuna ukongeza iOfisi yeMicrosoft endiyikhupheleyo ndiyonakalisile kwaye bandixelele ukuba izoyongeza kulwandiso lwe-exe kwaye ndiyenzile kodwa akukho nto ivulekileyo kwaye ngoku ibangele ingxaki ukuba ngoku akukho fayile ye-exe m ndivula nayiphi na i icon kwaye iinkqubo azenziwanga ndiyathemba ukuba uncedo lwakho enkosi….
umbulali weviniga…. Enkosi ngolwazi lwakho ... inyani kukuba zibalaseleyo ... kodwa uyazi ... Ndifuna ukuthumela umfanekiso kwi-imeyile yam kwaye andikwazi ... ndenzeni
OKULUNGILEYO BANDIBULALA NGOKUGQIBELA
ISAYITHI ILUNGILE KODWA YIINKCUKACHA EZILAHLEKILEYO
UJuan Camilo sitsho
Molweni enkosi ngaloo nto kodwa ayinazo izandiso ezaziwayo
Phendula i-juan camilo
Enkosi! Ulwazi beluluncedo kakhulu, ndingenile xk m yawa gwenxa k yonke into ibinolwandiso ekugqibeleni, sele ndiyicimile xD
Ndine-cd eneefoto endingenakuzijonga kwenye into ngaphandle kwe-pc, izandiso zeefoto zikhona .oca kukho umbukeli okanye isiguquli esivumela ukuba ndizirekhode ndibabukele kumabonwakude
Amagama omnxeba we Monica sitsho
NDINOMFANEKISO WEJPG KANYE NDIYAWUDINGA KWIFOMU YOKUPHRINTA KWIMAGAZINI BAYANDICELA INDLELA YOKUQALA, ENGINGENAYO NJENGOMFANEKISO ENDIMELE NDIWENZE UKUZE UMFANEKISO WAM UPHRIKIWE KWIMAGAZINI, NDANDIKHE NDAYIGUQULA KWI-FILE YEPDF KWADOBE KODWA ANDIZI UKUBA KONELE NA UNGANDINCEDA NCEDA
Ndingathanda ukwazi ukuba yintoni isicatshulwa kunye nomfanekiso owandisiweyo
u lonwabo sitsho
Utata womelele ndiyamthanda !!!!!!!!!
NGOKUKHAWULEKA NDIDINGA IFOTO NOMFANEKISO WOMFANEKISO WOMFANEKISO !!!!!! INGABA IKIEN INGANDINCEDA?
Kunye nevidiyo !!!!!!!!!!!!!!!!! : l
Andiziboni iifayile zevidiyo kunye nolwandiso lwe .exe kwiWMP 11. Ucebisa ntoni?
Kokokuqala ukuba ndibone iphepha lakho, kwaye ngokubhekisele kwindlela yokubona ulwandiso lwefayile beluncedo kakhulu
ndicela uncedo ndifuna ukutshintsha ifayile ukusuka kwi-zip ukuya kwifomathi ye-jpg
kuba akukho mntu upapasha oku kwaye kuba kubonakala ngathi kuthintelwe andiqondi
Enkosi, yandinceda kakhulu. Kucaciswe ngcono ukuba akunakufumaneka.
molo jonga ingxaki yam kukuba ndinefayile enokongezwa kwe-db kwaye ayivuleki naziphi na iinkqubo endinazo, ndingenza njani? Ngaba kufuneka ndikhuphele isilawuli? enkosi kwangaphambili ngoncedo lwakho.
Ndihlala ndifumana kubahlobo bam ii-imeyile ezineefayile ezandisiweyo
Ndingazi njani ukuba ndingazivula ngokuzolileyo, kuba bandoyikisile ngengxaki yentsholongwane? NdineAvira, AVG kunye neAvast antivirus
Ifloyidi epinki sitsho
Sawubona Killer Vinegar,
Umbuzo wam ngulo; Ndinenkqubo yokufaka .exe, ndiyikhuphele ngaphandle kodwa andikwazi ukuyisebenzisa kwikhompyuter yam kwaye ayiyiboni njengokuba injalo, ngohlobo lwefayile enokuphunyezwa ngokuzenzekelayo, nangona kunjalo iinkqubo zokufaka do. Kwakhona, kwale nkqubo inye, ndiyayibona, ndiyilayishe kwaye ndiyisebenzise ngaphandle kweengxaki kwezinye iikhompyuter.
Yintoni ifoto, iaudiyo kunye nevidiyo eyandisiweyo?
NDIYAFUNA UNCEDO, ukufihla umxholo wefayile ndalucima ulwandiso lwabo kwaye babonwa njengeefayile, ngoku andisalukhumbuli ulwandiso ababenalo, ndilufumanisa njani ulwandiso lweefayile zam zokuqala?
KULUNGILE ulwazi olu lundincedile kakhulu enkosi kakhulu 😉
ndincede i-pc yam ilahlekile .exe kwaye andinakuvula nayiphi na inkqubo ye-exe ndincede porvafor
molo, kulungile kakhulu kuyo yonke into oyicacisayo ndikubuza umbuzo ukuba ndikhuphele ividiyo okanye imovie kwi-ares, ngelixa ukhuphelayo ndifuna ukubona ukuba kuncinci kangakanani okukhutshelweyo kunye nomdlali we-ares uqobo ukubona ukuba yile movie okanye ividiyo ukuba bendikhangela Ingaba kukho umngcipheko wokuba intsholongwane iyakundifumana?
Enkosi kakhulu, ndiyathetha ukuba undincede kakhulu. Ndandisele ndikhathazekile ngenxa yokuba ndingazi ukuba ndingalutshintsha njani ulwandiso lweefayile njalo njalo. Enkosi!(:
Ndifuna ukwazi ukuba ndingayithumela njani i-imeyile kwaye nabani na oyifumanayo uyivula ngokuzenzekelayo. Enkosi
NDIDINGA UNCEDO, NGOKUPHELELEYO!
Ndidinga umntu oza kundinceda, ndinemifanekiso emininzi ye-iso endiyenzayo eneefayile zevidiyo_ts, kodwa ndikhuphele ezinye iimovie kwifomathi ye-m2ts kwaye ndafunda ukuba ndingatshintsha ifomathi ndingene kukhetho lwefolda, jonga ithebhu kwaye ususe ibhokisi yokukhangela ukufihla ifayile ulwandiso okanye enye into, kwaye ndiyitshisa imovie kodwa ngoku iifilimu zam ziyi-ISO azifuni ukubamba i-dvd yam kwaye ndibeka i-popcorn kwakhona kulwandiso kwaye ihlala ifana, umntu onokundinceda angaba uncedo olukhulu.
Molo apho!! Ndafaka ii-ares ndaza ndazisebenzisa, ndacima ikhompyuter yam kwaye xa ndiyivula kwakhona ndifuna ukusebenzisa iAres kwaye indixelela ukuba ayiziboni iifayile ze-exe. Andazi ukuba ungayisombulula njani, unganceda inkcazo elula, oko kukuthi, ayibobuchwephesha kangako, ukuze ndikuqonde ngcono, Ndiyabulela kakhulu kwangaphambili, ukuwola
Molo ekuseni! Xa ndiyifomatha imemori khadi kwifowuni yam kwaye ndiyidibanisa nepc ukufaka idatha, indixelela ukuba ine-exe eyandisiweyo kwaye ifowuni yam ayindifundeli, kutheni le nto isenzeka? Kwaye loluphi ulwandiso ekufuneka luyenzile ukuze ifowuni yam iyifunde? Enkosi!!!
Molo mhlobo, unjani? Ndinengxaki yokungakwazi ukuthatha imifanekiso kwifayile ye-movie ye-bd25 okanye ngeefraps okanye ngayo nayiphi na into endiyaziyo, ungandinceda enkosi
Molweni nonke. Ndinengxaki, ndinayo ifayile enokongezwa kwe-jpf kwaye andazi ukuba yeyiphi inkqubo okanye usetyenziso lokuyivula, ungandixelela ukuba loluphi na uhlobo lwesicelo oluhambelana nayo, enkosi kwangaphambili
Ndiyifumene le yoyikekayo konke oku akunamsebenzi
Ndiyayixhasa ivanesa lento iyonyanyisa